टेकअप पपीहरू बिक्रीका लागि - टेकअप टिनी, टोय, लघु पिल्पीहरू
टेकअप पल्पीज बिक्री, टेप र लघु पिल्पीहरू गोद लिने र उद्धारको लागि
चिसप पपीज बिक्री, दत्तक र उद्धारको लागि
तपाईंको कुकुर वा बिरालाको लागि पाल्तु जनावर बिमा
चियाहुआहुआस बिक्रीको लागि, उद्धारको लागि, धर्मपुत्र बनाउने
लघु पल्पीहरू बिक्री, उद्धार, गोदको लागि
Cockapoo कुकुरहरू बिक्री, उद्धार, गोदको लागि
Labradoodle पिल्पीहरू बिक्री, उद्धार, गोदको लागि
सस्तो कुकुरहरू बिक्री, उद्धार, गोदको लागि
मोर्की पपीज बिक्री, उद्धार, गोदको लागि
घर बिदाका लागि पालतु मित्रैलो होटल
A बाट सुरू हुने कुकुर जात
बीबाट सुरु हुने कुकुर जात
कुकुरहरू बचाउको लागि, ग्रहण ब्लग
अलाबामा मा प्यारा छान्नुहोस्
अलास्का मा कुकुर पप्पिज
क्यालिफोर्नियामा प्यारा पपीहरू
कोलोराडो मा प्यारा छान्नुहोस्
कनेक्टिकट मा प्यारा पपहरू
डेलावेयर मा चाउपिप्स
फ्लोरिडा मा प्यारा पपहरू
जर्जिया मा प्यारा पपहरू
हवाई मा सिकाउ पपीज
आईडाहोमा प्यारा पपहरू
इलिनोइसमा प्यारा पपिजहरू
आयोवा मा प्यारा पपीहरू
कन्सासमा कुकुर पपिजहरू
केन्टकीमा चाउपिप पिपिज
लुइसियाना मा चप्पल पिपिज
म्यासाचुसेट्समा प्यारा पपीहरू
मिशिगन मा चूप पिपिज
मिनेसोटा मा कुकुर पप्पिज
मिसिसिपीमा सिकाउन पप्पिजहरू
मिसौरीमा प्यारा पपीहरू
मोन्टाना मा टेकअप पपीज
नेब्रास्कामा प्यारा पपीहरू
नेभाडा मा प्यारा पपहरू
न्यू हैम्पशायरमा प्यारा पपीहरू
न्यू जर्सीमा प्यारा पपीहरू
न्यू मेक्सिकोमा प्यारा पपीहरू
नर्थ क्यारोलिनामा पपिजहरू
नर्थ डकोटा मा प्यारा पपीहरू
ओहायोमा प्यारा पपिजहरू
ओक्लाहोमा मा प्यारा छान्नुहोस्
ओरेगन मा कुकुर पप्पिज
पेनसिल्भेनिया मा चूप पिपिज
रोड आइलैंडमा पपिजहरू
दक्षिण क्यारोलिनामा पपिजहरू
दक्षिण डकोटा मा प्यारा पपीज
टेनेसीमा प्यारा पपीहरू
टेक्सास मा सिकाउ पपीज
युटामा कुकुर पपीहरू
भर्जिनिया मा प्यारा पपहरू
वाशिंगटन मा कुकुर पप्पिज
वेस्ट भर्जिनियामा प्यासहरू
विस्कॉन्सिनमा प्यारा पपहरू
तपाईंको खोजी टाइप गर्नुहोस्
कूपप पप्पिजहरू बिक्रीको लागि, टेकअप, सानो खेलौना र लघु पपीहरू सबै states० राज्यहरूबाट गोद लिन र उद्धारको लागि। यॉर्की, चिहुआहुआ, मोर्की, माल्टिज, पोडल, लाब्राडल, कोकापु, मालतीपु, पोमेरेनियन, शि ज्जु, निलो साबेल फ्रान्सेली बुलडग, हीलर, चाउ चौ कुत्ता र अधिक सहित। तल तपाईले धेरै स्याउप, लघु, र मिनी कुकुर जातका मा नस्ल स्पटलाइट्स पाउनुहुनेछ। हामीले तपाईंको परिवारको लागि उत्तम साथीको खोजीमा तपाईंलाई मद्दत गर्न धेरै जानकारीहरू समावेश गर्दछौं।
अलाबामा AL मा बिक्री को लागी कुकुरहरू
अलाबामा, कुनामा कुकुर ब्रीडरहरू र बचाव संगठनहरूबाट दत्तक र उद्धारका लागि कूपपिप्स र कुकुरहरू।
टेक अप यॉर्की
यी कुकुरहरू साना हुन सक्छन्, तर तिनीहरूको मीठा व्यक्तित्वहरू छन्। पकेट आकारको यार्कशायर टेरियर पर्समा सवारी गर्न र उत्तम ल्याप कुकुर बनाउन सक्छ। तिनीहरू चर्को सोरमा भौंक्छन् र १२-१-12 वर्षसम्म बाँच्न सक्छन। आकार भिन्न हुन्छ तर २--15 एलबीएस टेकअप साइजको लागि सहि हुन्छन्।
अलास्का एकेमा बिक्रीको लागि पियूहरू
अलास्का, एकेमा कुकुर ब्रीडरहरू र बचाव संगठनहरूबाट दत्तक र उद्धारको लागि कूपपिपी र कुकुरहरू।
सानो टिचप चिहुआहुवा साँच्चिकै एउटा सानो कुकुर हो। तिनीहरू २ देखि l lb जत्तिकै सानो हुन सक्छन् र शिक्षणको रूपमा लिइन्छ। तिनीहरू अरू नस्लहरू भन्दा बढी भौंकने गर्दछन् र एक-व्यक्ति कुकुर हुन सक्छन्। धेरैलाई कुचोल्न र उत्कृष्ट ल्याप कुकुरहरू बनाउन मनपर्दछ। सम्भव भएमा सम्पूर्ण परिवारसँग उनीहरूलाई सामजिक गर्नुहोस्। र्गमा कालो, सेतो, फन, क्रीम, चकलेट, सुन र मर्ललगायत अन्य धेरै भिन्नताहरू समावेश छन् र यो नस्ल दुबै कपालयुक्त र छोटो कपाल संस्करणहरूमा आउँदछ।
एरिजोना AZ मा बिक्रीको लागि पियर्स
एरिजोना, AZ मा कुकुरहरू र कुकुरहरू कुत्तुर प्रजननकर्ता र उद्धार संगठनहरूको गोद लिन र उद्धारको लागि।
अध्यापन पोम एउटा सानो, सक्रिय र बहुमूल्य कुकुर हो। तिनीहरू २ र l lbs बीचको तौल को आकारको रूपमा लिइन्छ। तिनीहरू रेड, सुन्तला, सेतो वा क्रीम, निलो, खैरो, कालो सहित केही रंगहरूमा आउँदछन् जसको केही अंश गरिएको छ। तिनीहरू पेची, मित्रवत र व्यायामको रूपमा सबै जातका छन्।
अर्कान्सास एआर मा बिक्री को लागि प्यासहरू
अर्कान्सासमा एआर, कुकुर कुकुर र कुकुरहरू कुकुर प्रजनक र उद्धार संगठनहरूको गोद लिन र उद्धारको लागि।
यो नस्ल पूडलको अनौपचारिक आकार भिन्नता हो। यसलाई टोय पोडल पनि भनिन्छ। तिनीहरू दुबै व्यक्ति र परिवारका लागि ठूलो साथीहरू बनाउँछन्। बुद्धिमान, मायालु, वफादार र सामाजिक। तिनीहरू कालो, चाँदी, निलो, खैरो, खुबैलो, बेज, खैरो, रातो र सेतो सहित धेरै रंगहरूमा आउँदछन्। तिनीहरू १० इन्च वा सानो हुन जान्छन्, र p पाउण्ड तौलमुनि स्प्रेप वा खेलौना आकार मानिन्छ।
क्यालिफोर्निया CA मा बिक्री को लागि पप्पिजहरू
प्यारा पपीहरू र कुकुरहरू क्यालिफोर्निया, CA मा कुकुर प्रजनक र उद्धार संगठनहरूबाट दत्तक र उद्धारको लागि।
सिकाप माल्टिज एउटा नाम हो जुन पहिलेदेखि नै सानो जातको सानो आकारमा दिइन्छ। तिनीहरू चंचल र ऊर्जा भरिएका हुन्छन् जबसम्म यो समयसम्म आउँदैन। यस नस्लले एक ठूलो ल्याप कुकुर बनाउँछ र तपाइँ तिनीहरूलाई तपाइँको पर्समा बोक्न सक्नुहुन्छ यदि सानो छ भने। तिनीहरूले एक अपार्टमेन्ट मा राम्रो बस्ने छ तर सबै नस्लों को व्यायाम चाहिन्छ सम्झना। सिकाप माल्टिज २ र l lbs को बिच हुन्छ।
कोलोराडो सीओमा बिक्रीको लागि प्यासहरू
कोलोराडो, सीओ, कुक पपीहरू र कुकुरहरू कुकुर ब्रीडरहरू र उद्धार संगठनहरूको गोद लिन र उद्धारको लागि।
यो डिजाइनर हाइब्रिड कुकुर पोडल र माल्टिसको प्रजननबाट आउँदछ। The Cupup Maltipoo कोमल र मायालु छ, महान परिवार कुकुर को रूप मा परिचित छ र आफ्नो मिठाई स्वभाव को कारण थेरापी कुकुर हुन प्रशिक्षण गर्न सकिन्छ। रंगहरूमा चाँदी, कालो, सेतो, कालो क्रीम, खरानी, ​​हल्का खैरो र अधिक समावेश छ। To देखि १ inches इन्च लम्बाई र to देखि १ l lbs को अनुमानलाई सामान्यतया टेकअप साइज मानिन्छ।
कन्ट्याकट सीटीमा बिक्रीको लागि कुकुरहरू
कूपिक पिल्सीहरू र कुकुरहरू कुत्तें प्रजनकहरू र कनेक्टिकट, सीटी मा उद्धार संगठनहरूको दत्तक र उद्धारको लागि।
यस लघु जातको teac पाउण्ड मुनिका तौल गर्न सिकाई साइज मानिन्छ। तिनीहरू प्राय: राम्रोसँग व्यवहार गर्दछन् र खेल्न र रमाइलो गर्न मन पराउँछन्। तिनीहरू जिज्ञासु र सतर्क छन् तर राम्रो गोद वा पल्ट कुकुरहरू पनि बनाउँदछन्। र्गमा सेतो, नुन र मरिच, सेतो अंकले कालो, प्लेटिनम चाँदी, कलेजो कालो मिर्च, कालो र चाँदी, चकलेट वा कलेजलगायत अन्य धेरै सामेल छन्। यस मिनी नस्ललाई १२-१ long वर्ष लामो जीवन बिताउन व्यायाम र उचित पशु चिकित्सक हेरचाह पनि आवश्यक पर्दछ।
डेलावेयर डेमा बिक्रीको लागि पियर्सहरू
डेलवेयर, डीई। मा कुकुर प्रजनक र उद्धार संगठनहरूबाट दत्तक र बचावको लागि कूपप पिज्जे र कुकुरहरू।
मोर्की एक डिजाइनर वा संकर हो जुन माल्टीज र योर्कशायर टेरियरको प्रजननबाट सिर्जना गरिएको हो। दुबै नस्ल खेलौना आकारको साथ, शिक्षण संस्करण साना आमा बुबा को प्रजननबाट आउँदछ। टिप आकार to देखि l एलबी हुन्छ। तिनीहरूले महान ल्याप कुकुरहरू बनाउँछन् र खेल्न र वरिपरि दगुर्न मन पराउँछन्। बच्चाहरू र परिवारका लागि महान प्रदान जुन उनीहरू जन्ममा राम्रोसँग सामजिक हुन्छन्। केहि रंगहरूले कालो, खैरो, कालो र सेतो, सुन र कालो र सुन समावेश गर्दछ। पर्समा बोक्न पर्याप्त साना र छोटो हिड्नको लागि पर्याप्त चंचल।
फ्लोरिडा FL मा बेच्नको लागि कुकुरहरू
फ्लोरिडा, FL मा कुकुर कुत्रा र कुकुरहरू कुकुर ब्रीडरहरू र उद्धार संगठनहरूको गोद लिन र उद्धारको लागि।
टेक फ्रेंच बुलडग
यो लघु जातले सामान्यतया १०-१ l lb वजन दायरामा भएर शिक्षण अवधि प्राप्त गर्दछ। उचाई करिब ११-१२ इन्च छ। फ्रान्सेली मर्यादित छ र जिद्दी हुन सक्छ तर प्रायः प्रेम गर्न र माया गर्न चाहन्छ। तिनीहरू धेरै रंगहरूमा आउँदछन् दुर्लभ बगैंचा, चकलेट, निलो र फन, कालो, सेबल, निलो, कालो र ट्यान र अधिक। तिनीहरू जीवन्त प्रजाति हुन् जसलाई दैनिक व्यायाम चाहिन्छ। पार्कमा छोटो हिड्ने वा घर मा फ्याँच खेल्ने महान विचार हो। उनीहरूलाई खेलौना चबाउन मन पर्छ र कुनै पनि जातको रूपमा, तपाईंले आफ्नो पशु चिकित्सकलाई मासिक भ्रमण गर्नुपर्नेछ।
जर्जिया GA मा बेच्नको लागि कुकुरहरू
जर्जिया, GA मा कुकुर कुत्रा र कुकुरहरू कुकुर प्रजननकर्ता र उद्धार संगठनहरूको गोद लिन र उद्धारको लागि।
हवाई HI मा बिक्रीको लागि प्यासहरू
हवाई, HI मा कुकुर ब्रीडरहरू र बचाव संगठनहरूबाट दत्तक र उद्धारको लागि कूपपिप्स र कुकुरहरू।
आईडाहो आईडीमा बिक्री को लागि पप्पिजहरू
कुकुरका छाउराहरु र कुकुरहरु लाई कुहिनो बनाउने र कुकुर प्रजनक र उद्धार संगठनहरु लाई आईडाहो, ID मा।
इलिनोइस IL मा बेच्नको लागि कुकुरहरू
इलिनोइस, IL मा कुकुर ब्रीडरहरू र बचाव संगठनहरूबाट दत्तक र उद्धारको लागि कूपपिप्स र कुकुरहरू।
टेकप पपीज इण्डियानामा बिक्रीका लागि
इन्डियाना, कुनामा कुकुरहरू र कुकुरहरू कुकुर प्रजननकर्ता र उद्धार संगठनहरूको गोद लिन र उद्धारको लागि।
आयोवा IA मा बेच्नको लागि कुकुरहरू
आयोवा, IA मा कुकुर ब्रीडरहरू र बचाव संगठनहरूबाट दत्तक र उद्धारको लागि कूपपिप्स र कुकुरहरू।
Kansas KS मा बिक्रीको लागि कुकुरहरू
कान्सास, के.एस. मा कुकुर कुत्रा र कुकुरहरू कुकुर ब्रीडरहरू र बचाव संगठनहरूबाट दत्तक र उद्धारको लागि।
केन्टकी केवाई मा बिक्रीको लागि प्यासहरू
केन्टकी, KY मा कुकुर कुकुर र कुकुरहरू कुकुर प्रजनक र उद्धार संगठनहरूको गोद लिन र उद्धारको लागि।
लुइसियाना लामा बिक्रीको लागि प्यारा पपीहरू
लुइसियाना, एलएमा कुकुरहरू र कुकुरहरू कुकुर ब्रीडरहरू र उद्धार संगठनहरूको गोद लिन र उद्धारको लागि कूपप पिज्जे र कुकुरहरू।
मेनु एमईमा बिक्रीको लागि प्यारा पपिजहरू
मेनु, ME मा कुकुर ब्रीडरहरू र बचाव संगठनहरूबाट दत्तक र उद्धारको लागि कूपपिप्स र कुकुरहरू।
क्रीप पप्पीज बिक्रीको लागि मैरिल्याण्ड एमडीमा
कुकुर पप्पिज र कुकुरहरू गोठालो गर्ने र कुकुर ब्रीडरहरू र मेरील्याण्ड मा उद्धार संगठनहरू बाट उद्धार, एमडी।
म्यासाचुसेट्स एमए मा बिक्री को लागि प्यासहरू
म्यासाचुसेट्समा कुकुर कुकुरहरू र कुकुरहरू कुकुर ब्रीडरहरू र बचाव संगठनहरूबाट दत्तक र उद्धारको लागि, एमए।
मिशगन MI मा बिक्रीको लागि प्यासहरू
मिशिगन, MI मा कुकुर ब्रीडरहरू र बचाव संगठनहरूबाट दत्तक र उद्धारको लागि कूपपिप्स र कुकुरहरू।
मिल्नेसोटा MN मा बिक्रीको लागि कुकुरहरू
मिनीसोटा, MN मा कुकुर ब्रीडरहरू र बचाव संगठनहरूबाट दत्तक र उद्धारको लागि कूपपिप्स र कुकुरहरू।
मिसिसिपी एमएसमा कपाल पपिजहरू बिक्रीको लागि
मिसिसिपी, MS मा कुकुर ब्रीडरहरू र बचाव संगठनहरूबाट दत्तक र उद्धारको लागि कूपपिप्स र कुकुरहरू।
मिसौरी मोमा बिक्रीको लागि प्यारा पपीहरू
मिसौरीमा कुकुर ब्रीडरहरू र बचाव संगठनहरूबाट दत्तक र बचावको लागि कूपपिप्स र कुकुरहरू।
मोन्टाना MT मा बेच्नको लागि कुकुरहरू
मोन्टाना, MT मा कुकुर ब्रीडरहरू र बचाव संगठनहरूबाट दत्तक र उद्धारको लागि कूपपिप्स र कुकुरहरू।
नेब्रास्का NE मा बेच्नको लागि कुकुरहरू
नेब्रास्का, कु.अ.प. मा कुकुर ब्रीडरहरू र बचाव संगठनहरूबाट दत्तक र बचावको लागि कूपप पिज्जे र कुकुरहरू।
नेवाडा NV मा बिक्री को लागि प्यासहरू
नेवाडा, NV मा कुकुर ब्रीडरहरू र उद्धार संगठनहरूको गोद लिन र उद्धारको लागि कूपपिप्स र कुकुरहरू।
न्यू हम्पशायर एनएच मा बिक्रेको लागि कुकुरहरू
न्यू हम्पशायर, NH मा कुकुर ब्रीडरहरू र बचाव संगठनहरूबाट दत्तक र बचावको लागि कूपपिप्स र कुकुरहरू।
न्यू जर्सी न्यू जर्सीमा बिक्रीको लागि प्यारासुरा
न्यू जर्सी, न्यू जर्सीमा कुकुरहरू र कुकुरहरू कुकुर ब्रीडरहरू र बचाव संगठनहरूबाट दत्तक र उद्धारको लागि कूपप पिज्जे र कुकुरहरू।
न्यू मेक्सिको एनएममा बिक्रेको लागि चप्पल
न्यू मेक्सिको, एनएममा कुकुर ब्रीडरहरू र बचाव संगठनहरूबाट दत्तक र बचावको लागि कूपपिप्स र कुकुरहरू।
न्यूयोर्क न्यूयोर्कमा बिक्रेको लागि चप्पल
न्यूयोर्क, न्यूयोर्कमा कुकुर ब्रीडरहरू र बचाव संगठनहरूबाट दत्तक र उद्धारको लागि कूपपिप्स र कुकुरहरू।
नउरो क्यारोलिना एनसीमा बिक्रेको लागि चप्पल
न्यु क्यारोलिना, NC मा कुकुर कुत्रा र कुकुरहरू कुकुर प्रजननकर्ता र उद्धार संगठनहरूको गोद लिन र उद्धारको लागि।
न्यु डकोटा एनडीमा बिक्रीका लागि कुकुरहरू
न्यु डकोटा, ND मा कुकुर ब्रीडरहरू र बचाव संगठनहरूबाट दत्तक र बचावको लागि कूपपिप्स र कुकुरहरू।
ओहियो OH मा बिक्रीको लागि पियर्स
ओहायो, OH मा कुकुर ब्रीडरहरू र बचाव संगठनहरूबाट दत्तक र उद्धारको लागि कूपपिप्स र कुकुरहरू।
ओक्लाहोमा ठीक मा बिक्री को लागि पप्पिज
ओक्लाहोमा, कुकुर कुकुरहरू र कुकुरहरू कुकुर ब्रीडरहरू र उद्धार संगठनहरूको गोद लिन र उद्धारको लागि।
ओरेगन OR मा बिक्रीको लागि पियर्स
ओरेगॉन, वा मा कुकुर ब्रीडरहरू र उद्धार संगठनहरूबाट दत्तक र बचाव को लागि कुक पप्पिज र कुकुरहरू।
पेनसिल्भेनिया PA मा बेच्नको लागि कुकुरहरू
पेनसिल्भेनिया, पीएमा कुकुर कुत्रा र कुकुरहरू कुकुर प्रजननकर्ता र उद्धार संगठनहरूको गोद लिन र उद्धारको लागि।
रोडप आइल्याण्ड आरआई मा बेच्नको लागि कुकुरहरू
रोडप आइल्याण्ड, RI मा कुकुरहरू र कुकुरहरू कुकुर ब्रीडरहरू र उद्धार संगठनहरूको गोद लिन र उद्धारको लागि कूपप पिगिजहरू र कुकुरहरू।
दक्षिण क्यारोलिना एससीमा बिक्रीको लागि प्यारा पपीहरू
कुकुर पप्पिज र कुकुरहरू दक्षिण क्यारोलिना, एससी मा कुकुर प्रजनक र उद्धार संगठनहरु बाट दत्तक र बचाव को लागी।
साउथ डकोटा एसडीमा बिक्रीको लागि कुकुरहरू
साउथ डकोटा, SD मा कुकुर ब्रीडरहरू र बचाव संगठनहरूबाट दत्तक र उद्धारको लागि कूपप पिज्जे र कुकुरहरू।
टेनेसी TN मा बिक्रीको लागि कुकुरहरू
टेनेसी, टी.एन. मा कुकुर ब्रीडरहरू र उद्धार संगठनहरूको गोद लिन र उद्धारको लागि कूपप पिज्जे र कुकुरहरू।
टेक्सास TX मा बेच्नको लागि कुकुरहरू
टेक्सास, TX मा कुकुर ब्रीडरहरू र बचाव संगठनहरूबाट दत्तक र उद्धारको लागि कूपपिपीहरू र कुकुरहरू।
युटाह यूटीमा बिक्रीको लागि प्यारा पपीहरू
युटाह, यूटीमा कुकुर कुत्रा र कुकुरहरू कुकुर प्रजननकर्ता र उद्धार संगठनहरूको गोद लिन र उद्धारको लागि।
वरम्पन्ट VT मा बिक्री को लागि प्यासहरू
भेयरमन्ट, VT मा कुकुर बत्ती र कुकुरहरू कुकुर प्रजननकर्ता र बचाव संगठनहरूबाट दत्तक र बचाव को लागि कुक पपीहरू र कुकुरहरू।
भर्जिनिया VA मा बेच्नको लागि कुकुरहरू
वर्जिनिया, VA मा कुकुर ब्रीडरहरू र बचाव संगठनहरूबाट दत्तक र उद्धारको लागि कूपपिप्स र कुकुरहरू।
वाशिंगटन डब्ल्यूए मा बिक्री को लागि प्यासहरू
वाशिंगटन, डब्ल्यूए मा कुकुर ब्रीडरहरु र उद्धार संगठनहरु बाट दत्तक र बचाव को लागि कुक पप्पिज र कुकुरहरु।
वेस्ट भर्जिनिया डब्ल्यूभी मा बेच्नको लागि कुकुरहरू
वेस्ट भर्जिनिया, डब्ल्यूभी मा कुकुरहरू र कुकुरहरू कुकुर प्रजननकर्ता र उद्धार संगठनहरूको गोद लिन र उद्धारको लागि।
विस्कॉन्सिन WI मा बेच्नको लागि कुकुरहरू
विस्कॉन्सिन, WI मा कुकुरहरू र कुकुरहरू कुत्तुर प्रजननकर्ता र उद्धार संगठनहरूको गोद लिन र उद्धारको लागि।
वायोमिंग WY मा बिक्रीको लागि प्यासहरू
वायोमिंग, डब्ल्यूवाई मा कुकुर ब्रीडरहरू र बचाव संगठनहरूबाट दत्तक र बचावको लागि कूपपिप्स र कुकुरहरू।
के एक सिकाउप पिल्ला बनाउँछ?
अमेरिकी केनेल क्लबले स indicated्केत गरे जस्तै, क्यानिनहरू "शिकार" मानिन्छ यदि तिनीहरू दुई र पाँच पाउण्डको दायरामा कही तौल गर्छन्, र पूर्ण रूपमा विकसित भए १ inches इन्च भन्दा कम मापन गर्दछन्।
यसबाहेक, "खेलौना" जातले कुनै पनि केनहरू समावेश गर्दछ जुन १ p पाउण्ड भन्दा कम तौलको हुन्छ, त्यसैले सिकाप पोचहरू "खेलौना" को एक प्रमुख पक्षको रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ, साथै
कुन हदसम्म सिकाउ पपीहरू बस्छन्?
बन्दको अवसरमा कि तपाइँले तपाइँको अन्वेषण प्रभावी ढंगले तपाइँको सिकाउ डग पत्ता लगाउनको लागि गर्नुभयो, तपाइँ एक सहयोगीसँग पछि १ 15 बर्षसम्म अन्त गर्न सक्नुहुन्छ।
लिटलर क्यानिनहरूले गर्छ, सामान्यतया, ठूला नस्लहरू भन्दा लामो समयसम्म बाँच्दछ, र जब पनि उत्तम सम्भव उपचार दिईन्छ भने, तपाईंको शिक्षण कुत्ताले पनि लामो, सन्तोषजनक जीवन बिताउन सक्छ।
साना कुकुरहरूको खर्च कति हुन्छ?
यी पिल्लाहरू फलस्वरूप "अध्यापन" भनिन्छ र तिनीहरू नियमित रूपमा शक्तिशाली मूल्यमा बेचिन्छन्।
एक सानो बच्चाको सानो टुक्राको ठूलो पैसा ठूलो हुन्छ र?
अध्यापन पिल्ला नस्लको लागत any $$० र $ २ of० को दायरामा कतै सजीलो दगुर्न सक्छ!
के तपाई सिकाउ पपीहरू हिड्नु पर्छ?
अध्यापन साना कुकुरलाई घुम्नु भनेको अरू केही समुद्री नस्लहरूको घुम्टो जत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।
यसको पछाडिको मूल उद्देश्य यो सानो पिल्ला हो बाहेक सबै चीजको लागि दिनहुँ बाह्य हवाको अंशको एक हिस्सा चाहिन्छ।
उहाँलाई ट्रोलिंग गर्दा ठूलो पोच सक्रोलसँग तुलना गर्न सकिदैन, यो अझै आवश्यक छ।
सब भन्दा उत्तम अध्यापन पिल्ला के हो?
आकारको बावजुद (टेकअप, टोय, स्ट्यान्डर्ड, जायन्ट), पोडल प्रजाति आज पृथ्वीमा टहलिएको सबैभन्दा चतुर पोच प्रजातिहरू मध्ये एक हो।
अध्यापन कुकुरहरू कसरी ठूलो हुन्छन्?
अनौपचारिक रूपमा, एक अध्यापन पिल्ला पोच हो जुन कुनै घटनामा १ बर्ष पुरानो हो र १ measures इन्च वा सोभन्दा कम मापन गर्ने उपाय हो।
तिनीहरू द्वारा र ठूला गेज p पाउंड वा कम विकासमा।
जे होस्, त्यहाँ सिकाईट पिल्पीहरू निर्देशित वा आधिकारिक नस्ल नभएकोले त्यहाँ आवाश्यकता चाहिन्छ।
युवा डगहरूलाई सिकापको आवश्यकता के छ?
युवा युवा कुकुरहरूलाई सिकाउन फाइबरमा नियमित धनी खाने प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।
क्यान्ड वा सुख्खा पोषणको लागि खोजी गर्नुहोस् जसमा अण्डाहरू, कुखुरा, प्राकृतिक उत्पादहरू, भेजीहरू, र ओमेगा uns असंतृप्त फ्याटहरू फिक्सिंगहरू छन्।
त्यस्तै गरी, तपाईंले लिनु भएको पोच पोषण सुनिश्चित गर्नुहोस् कारो सिरप।
क्युप युवा डगहरू कम ग्लूकोजमा झुकाव हुन्छन् र यो फिक्सिंगले सन्तुलनमा मद्दत गर्दछ।
के सिकाप पपुहरूले ठूलो सौदा गर्छन्?
मानव प्रोप्राइटरमा लिनुहोस्, र तपाईंले तयारीको राम्रो ठाउँ पत्ता लगाउनुहुनेछ जसले साना सिपअप क्यानाइनलाई ठूलो सम्झौताको आधारमा बार्क गर्न प्रोत्साहन गर्दछ जुन सबै सिकाउ पपीहरू एक टन बर्क गर्दैनन्।
केही व्यक्तिले टाउकोमा कीलमा हिर्काए — यो जातको बारेमा हैन, न त साइनाको आकारको बारेमा छ।
बन्दको अवसरमा तपाइँसँग शान्त, शान्त पाठक पिल्ला हुनु आवश्यक छ, तिनीहरूलाई शान्त र बस्नुहोस्।
कुन सानो डुine्गा घर भत्काउन सबैभन्दा सहज छ?
सामान्य भन्दा सानो Schnauzers हाउसट्रेनको लागि सबैभन्दा सहज स p्ख्याको पोच प्रजननहरू मध्ये एक हो।
केहि युवा कुकुरहरू पनि गृहप्रबन्धित हुनेछन् जब तिनीहरूले प्रजनन घर छोड्छन्, स्पष्ट रूपमा, घटनामा कि तपाइँ तयारी प्रविधिको परिवर्तन गर्नुहुन्छ (उदाहरणका लागि घाँसको सट्टा कुशन्सको उपयोग गरेर) यसले कुचोलाई अवरोध पुर्‍याउनेछ।
प्रोत्साहित गर्ने निर्देशनहरू:
क्यार्नरी युवा डग्गीहरू, थोरै बेलीहरू र क्यालोरीहरू जलाउन उन्नत क्षमताको कारण, मध्यम र सिकाउपपलहरूले प्रति दिन केहि बढी खाना खानुपर्दछ।
तिनीहरू कम AT- hours घण्टा कम्तिमा खान पर्छ र अतिरिक्त TINY युवा कुकुरहरूको लागि। तिनीहरूले प्रत्येक 4-5- hours घण्टा खान पर्छ।
त्यहाँ कत्ति संख्याको सिकाउ पप्पिजहरू छन्?
चिनो पिल्ला प्रजातिहरूले खेलौना प्रजातिको लागि एकेसी मानक बिल्कुल तौल गर्दैन, तपाईं वास्तवमा कुनै पनि नस्ललाई टेकप हुन सक्नुहुन्छ।
के अधिकांश raisers लाई एक Teaup मा मानिन्छ एक पोच हो जुन under पाउंड मुनिको हुन्छ र १4इन्च लम्बाई मुनि खडा हुन्छ।
यी बेन्चमार्कहरू द्वारा, त्यहाँ केवल gen वास्तविक टेकअप ब्रीडहरू छन्।
तपाईं एक शिक्षण पपलाई के खान दिनुहुन्छ?
चिया पिप्प्सलाई फाइबरमा नियमित धनी खाने कुराको लागि प्रोत्साहित गर्नुपर्दछ।
क्यान्ड वा सुख्खा पोषणको लागि खोजी गर्नुहोस् जसमा अण्डाहरू, कुखुरा, जैविक उत्पादनहरू, भेजीहरू, र ओमेगा uns असंतृप्त फ्याटहरू फिक्सिंगहरू हुन्छन्।
थप रूपमा, तपाईंले उठाएको क्यानाइन पोषण सुनिश्चित गर्नुहोस् क्यारो सिरप समावेश गर्दछ।
टेकप पपुहरू कम ग्लूकोजमा झुकाव हुन्छन् र यो फिक्सिंगले सन्तुलनमा मद्दत गर्दछ।
यस समयमा धेरै कुकुर प्रजनक, उद्धारकर्ता र आश्रयहरू निम्न राज्यहरूमा पठाउँछन्: अलाबामा AL - अलास्का एके - एरिजोना एजेड - अर्कानस एआर - क्यालिफोर्निया सीए - कोलोराडो सीओ - कनेक्टिकट सीटी - डेलावेयर डे - फ्लोरिडा एफएल - जर्जिया GA - हवाई HI - आईडाहो आईडी - इलिनोइस आईएल - इंडियाना आईएन - आयोवा आईए - कन्सास केएस - केन्टकी केवाई - लुइसियाना एलए - मैने एमई - मेरील्यान्ड एमडी - म्यासाचुसेट्स एमए - मिशिगन एमआई - मिनेसोटा एमएन - मिसिसिपी एमएस - मिसौरी मो - मोन्टाना एमटी - नेब्रास्का NE - न्यू हैम्पशायर एनएच - न्यू जर्सी एनजे - न्यू मेक्सिको एनएम - न्यूयोर्क न्यूयोर्क - उत्तर क्यारोलिना एनसी - उत्तर डकोटा एनडी - ओहियो ओएच - ओक्लाहोमा ओके - ओरेगन ओआर - पेन्सिलभेनिया पीए - रोड आइलैंड आरआई - दक्षिण क्यारोलिना एससी - दक्षिण डकोटा एसडी - टेनेसी TN - टेक्सास TX - यूटा UT - भर्मोन्ट VT - भर्जिनिया VA - वाशिंगटन WA - वाशिंगटन, DC - वेस्ट भर्जिनिया WV - विस्कॉन्सिन WI - Wyoming WY - माफ गर्नुहोस् हामी हवाई HI मा यात्रा गर्दैनौं।
टेक अप यॉर्की,
टेक फ्रेंच बुलडग,
टेक अप यॉर्की पू,
टेक बिचोन फ्रीज,
कूप Shih Tzu,
टीप क्यावालीयर किंग चार्ल्स स्पानियल,
कियुक योर्कशायर टेरियर,
चिनियाँ चिनियाँ क्रेस्ट,
चिनो लघु चित्रकला,
टेक इटालियन ग्रेहाउन्ड,
कूप र्याट टेरियर,
टीप रूसी त्वेत्नाया बोलोनका,
अध्यापन अंग्रेजी कोकर स्पानियल,
कूप अप सीमा टेरियर,
टेक बोस्टन टेरियर,
चाउप केर्न टेरियर,
चियाक ककर स्पानिएल,
चियाक ज्याक रसल टेरियर,
कूप अप नर्विच टेरियर,
टेक पेमब्रोक वेल्श कोर्गी,
किकअप स्कटिश टेरियर,
टेकप शेटल्याण्ड शिपडग,
टेकअप शिबा इनु,
चिया सिल्की टेरियर,
कूप अप स्मूद फोक्स टेरियर,
कियुक वेस्ट हाइलैंड व्हाइट टेरियर,
टीप वायर फक्स टेरियर,
अध्यापन अंग्रेजी बुलडग,
टेकअप ल्हासा अप्सो,
मिनी अस्ट्रेलियाई शेफर्ड,
लघु ओल्ड अंग्रेजी बुलडग,
लघु सीमा कोली,
लघु फ्रान्सेली बुलडग,
लघु अंग्रेजी बुलडग,
लघु यॉर्की पू,
लघु बिचोन फ्रीज,
लघु Shih Tzu,
लघु कैवालीयर किंग चार्ल्स स्पेनी,
लघु यार्कशायर टेरियर,
लघु ब्रसेल्स ग्रिफन,
लघु चिनियाँ क्रेस्ट,
लघु लघु पिनसेचर,
लघु इटालियन ग्रेहाउन्ड,
लघु अलास्कन क्ली काई,
लघु रेट टेरियर,
लघु रुसी त्वेत्नाया बोलोनका,
लघु अंग्रेजी अंग्रेजी ककर स्पानियल,
लघु Cocker Spaniel,
लघु ज्याक रसल टेरियर,
लघु नोर्च टेरियर,
लघु पेम्ब्रोक वेल्श कोर्गी,
लघु स्कटिश टेरियर,
लघु Shetland Sheepdog,
लघु वेस्ट हाइलैंड व्हाइट टेरियर,
लघु वायर फक्स टेरियर,
मिनी फ्रेन्च बुलडग,
मिनी अंग्रेजी बुलडग,
मिनी क्याभिलियर किंग चार्ल्स स्पानियल,
मिनी यार्कशायर टेरियर,
मिनी ब्रसेल्स ग्रिफन,
मिनी चिनियाँ क्रेस्ट,
मिनी इटालियन ग्रेहाउन्ड,
मिनी रट टेरियर,
मिनी रूसी त्वेत्नाया बोलोनका,
Mini अंग्रेजी Cocker Spaniel,
मिनी बोर्डर टेरियर,
मिनी ज्याक रसल टेरियर,
मिनी नोर्विच टेरियर,
मिनी पेम्ब्रोक वेल्श कोर्गी,
मिनी स्कटिश टेरियर,
मिनी स्मूथ फोक्स टेरियर,
मिनी वायर फक्स टेरियर
माथिको जानकारी कुन पपी ब्रीडर, कुकुर उद्धार वा आश्रय तपाईं र तपाईंको परिवारको लागि सही हो भनेर निर्णय गर्न मद्दतको लागि हो। हामी सूचीकृत कसैको साथ सम्बन्धित छैनौं त्यसैले यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईं आफ्नो अनुसन्धान गर्नुहोस् र निश्चित गर्नुहोस् कि यो तपाईं र तपाईंको परिवारको लागि उपयुक्त छ।
गुगल, याहू, बिंग र अन्य खोज इञ्जिनहरूका लागि महत्त्वपूर्ण नोट:
यी सूचीबद्धहरू यहाँ नि: शुल्क राखिएको थियो र केवल जानकारीका उद्देश्यका लागि हो र भुक्तान गरिएको लिंकहरू छैनन्।
कृपया पढ्नुहोस्: वेस्टर्न युनियन, पैसा ग्राम वा वाल-मार्ट मार्फत वाल-मार्टमा पैसा पठाउन भन्नुहोस् भन्ने स्क्यामहरूबाट सावधान हुनुहोस्। मेरो सल्लाह भनेको तपाईंको कुकुरलाई व्यक्तिगत रूपमा उठाउनुहोस् र तिर्नुहोस्। सधैं सार्वजनिक ठाउँमा भेट्नुहोस् र कहिले एक्लो हुँदैन। यदि तपाईंले पिल्ला पठाउने निर्णय गर्नुभयो भने म पेपललाई सुझाव दिन्छु वा तपाईंलाई पिल्लाको वितरणमा भुक्तान गर्दछु।
कृपया साझा गर्नुहोस्
तपाईंको भाषामा पृष्ठ अनुवाद गर्नुहोस्
सब भन्दा लोकप्रिय पृष्ठहरु
कसरी हात सेनिटाइजर बनाउने
चियाहुआहुआस बिक्रीको लागि, दत्तक
कियप Shih Tzu पपीज बिक्री, दत्तक को लागि
टेकअप यॉर्की पपीज बिक्री, दत्तक ग्रहणको लागि
Cockapoo पपीज बिक्री को लागी, गोद लिन
टेकअप मोर्की पपीज बिक्री, दत्तक ग्रहणको लागि
Labradoodle पिल्पीहरू बिक्रीको लागि, गोद लिनुहोस्
लघु पप्पिजहरू बिक्रीको लागि, दत्तक ग्रहणको लागि
चिसप पपीज बिक्री, दत्तक ग्रहणको लागि
चिसप पपीज बिक्री र दत्तक ग्रहणको लागि
© प्रतिलिपि अधिकार - निक द्वारा OceanWP थिम